प्रचण्डको हारमै छ राष्ट्रको जित : विक्रम पाण्डे (भिडियोसहित) | नेपाल आज
प्रचण्डको हारमै छ राष्ट्रको जित : विक्रम पाण्डे (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४ गते मा प्रकाशित
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा विक्रम पाण्डे भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिए । प्रचण्ड र पाण्डेले एउटै मन्त्रिमण्डलमा रहेर झण्डै ९ महिना सहकार्य गरे । तर, त्यो बेला एउटै मन्त्रिमण्डलमा रहेका यी दुई नेता अहिले चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न जोडतोडले लागिपरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेको साथ छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का उपाध्यक्ष एवं मन्त्री पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको छ । यी दुई नेताबीचको चुनावी टक्करले चितवनको यो क्षेत्र राम्रैसँग तातेको छ ।
विक्रम पाण्डेले गत संविधानसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट जितेका थिए भारी मतले । तर, अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा यो क्षेत्रबाट जित्नै हौवा फैलाइएको छ र यौ हौवामा कुनै पनि सत्यता नभएको दाबी गर्छन् पाण्डे । भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई यहाँका जनताले चिन्दैनन् । उनले यहाँ आएर कहिले राजनीति गरे ? उनले के गरे र यहाँका जनतालाई ? उनलाई यहाँका जनताले के आधारमा मत दिने ? मत दिन पनि एउटा कारण त हुनु प-यो नि ?’
पाण्डे भने आफूले विगतमा यही क्षेत्रबाट जितेको, जितेपछि धेरै विकासे काम गरेकाले र जनताको मन मनमा बस्न सफल भएकाले जित्नेमा ढुक्क छन् । ‘को हो र प्रचण्ड ? किन डराउने उनीसँग ? भन्ने नै हो भने प्रचण्डसँग मेरो तुलना नै हुन सक्दैन । म उनलाई भारी मतले हराउँछु । मैले सांसद हुँदा पनि यहाँ धेरै काम गरेको छु, अझै धेरै काम पाइपलाइनमा छन् । ती काम पनि मैले पूरा गर्नुछ, जितेपछि अझै धेरै काम गर्ने छु,’ पाण्डे भन्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो संविधानसभामा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट जितेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रचण्डले सिराहा –५ बाट ९ सयको मतान्तरले जिते । काठमाडौं १० बाट हारे मात्रै होइन, तेस्रो बनेका थिए । उनले हरेक पटक निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै गएकाले पनि आफूले जित्ने दाबी गर्छन् पाण्डे । ‘उनले पहिले जहाँ जहाँबाट लडे जितेपछि त्यहीँका जनतालाई झुक्याए, अहिले चितवनका जनतालाई झुक्याउन चुनाव लड्दै छन्, चुनाव जित्ने दृढ विश्वास भए त पहिलाकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु पर्ने हो नि,’ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रचण्ड लडेकोमा आक्रोश पोख्दै पाण्डे भन्छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१० बाट हारको स्वाद चाखेका प्रचण्ड सिराहा–५ बाट पनि हारेको र जबर्जस्ती जिताइएको भन्छन् पाण्डे । ‘प्रचण्ड जहाँबाट उठे पनि जिताइदिनु पर्ने, नजिते पनि जिताइएको घोषणा गर्नुपर्ने, यस्तो पनि हुन्छ र ?’ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रचण्डले साँच्चै चुनाव जितेको हो कि होइन, अब थाहा हुन्छ ।’
उनी मुलुकलाई सही दिशामा लैजान पनि प्रचण्डलाई हराउनै पर्ने तर्क गर्छन् । ‘प्रचण्डलाई हराइयो भने मात्र यो देशले स्थिरता पाउँछ, प्रचण्डलाई ५ वर्ष आराम गर्न दिउँ, देश आफै बन्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रचण्डले समाजका लागि के चाहिँ गरे र ? उही धोकाको राजनीति, स्वार्थको राजनीति, फुटाउ र राज गरको राजनीति, जताततै ताण्डवको राजनीति । यो बाहेक उनले के चाहीँ गरे र ?’
पाण्डे प्रचण्डलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ को राजनीति गर्ने व्यक्तिको संज्ञा दिन्छन् । ‘प्रचण्ड युज एन्ड थ्रोको मात्र राजनीति गर्छन्, आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्छन् उनी, आफ्नो स्वार्थका लागि उनी जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्, स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्न पछि पर्दैनन्, यो कुरा त चितवनवासीले राम्रोसँग थाहा पाइसकेका छन् । प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकामा छोरीलाई जिताउन खेलेको खेल कसलाई थाहा छैन र ?’ पाण्डे भन्छन् ।
पाण्डे एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनलाई कहीँ पनि मत दिनु हुन्न भन्ने धारणा राख्छन् । ‘उग्रबामहरुलाई देश चलाउन दियौं भने देश झन बर्बाद हुन्छ । उनीहरुलाई ठाउँ दिनै हुन्न,’ उनी भन्छन् ।
आदित्यलाई बोक्ने यि पो रहेछन् !
आइतबार, ०२ साउन २०७३
सरकार बचाउँन यादवलाई ओलीको ५० करोडको अफर
बिहिबार, ०६ साउन २०७३
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुने बाटोमा राजनीति